Outlook Express Ungasusi isixhobo. Outlook Express Ukucinywa kwe-imeyile.
DataNumen Outlook Express Undelete Ingaba i eyona Isixhobo sokufumana kwakhona ii-imeyile ezisusiweyo Outlook Express. Isebenzisa ubuchwephesha obuphambili ukuskena iifayile ze-DBX kwaye ungashenxisi ii-imeyile zakho kangangoko kunokwenzeka.
Nceda usebenzise DataNumen Outlook Express Repair Ukufumana ii-imeyile kwi-CORRUPT Outlook Express Iifolda zeposi.
Nceda usebenzise DataNumen Outlook Repair ukubuyisa ii-imeyile kunye nezinye izinto ezivela kwiifayile ze-CORRUPT Outlook PST.
Ngoba DataNumen Outlook Express Undelete?
Inqaku nje lokwazisa ukuba le nkqubo ingentla isebenze kakuhle kakhulu kwaye ndiphinde ndachacha ngempumeleloost Ama-3000 ee-imeyile endithe ndafumana ngengozi
Ndizamile ezinye iimveliso ezintathu ngaphambi kokuba ndifumane kwangaphambili Outlook Express Ukuchacha. Iinkqubo ezimbini zifumene yonke imiyalezo, nangona kunjalo, imiyalezo ibinayo
My Guy Guy
Ndinengxaki kwifayile ye-1.5GB yokukhuphela, bendixinene kodwa i-AODR isombulule umba wam kwaye yandinceda ukuba ndibuyise yonke idatha yam, Enkosi kakhulu
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Inkxaso yokufumana kwakhona ii-imeyile ezisusiweyo kwiMicrosoft Outlook Express 5/6 iifolda zemeyile.
Inkxaso yokufumana iifayile ze-dbx ezigcinwe kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, ezinjengeediski zefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona ibhetshi yeefayile ze-dbx.
Inkxaso yokufumana kwakhona ii-imeyile kwiifayile ze-dbx ezinkulu njenge-4GB.
Inkxaso yokufumana kunye nokukhetha iifayile ze-dbx ezizakufunyanwa kwakhona kwikhompyuter yendawo.
Idityaniswe neqokobhe leWindows, ukuze ubenakho ukubuyisa ii-imeyile kwifolda yeposi kunye nomxholo (cofa ekunene) kwimenyu yeWindows Explorer ngokulula.
Outlook Express igcina zonke ii-imeyile zencwadi eneenkcukacha kwifayile ye-dbx ehambelanayo. Umzekelo, ifayile ye Inbox.dbx iqulethe iiimeyile eziboniswe kwi I-inbhoks yeposi ifolda kwi Outlook Express, Ifayile ye-Outbox.dbx iqulethe ii-imeyile eziboniswe kwifolda yeposi yebhokisi ephumayo, njalo njalo.
Ukuba ucima ii-imeyile ezininzi kwifolda yeposi ngempazamo, unokusebenzisa DataNumen Outlook Express Undelete ukuskena ifayile ye-dbx ehambelana nefolda, fumana ii-imeyile ezisusiweyo kwaye uzigcine njengeefayile zeemem ezinokungeniswa ngokulula kwakhona Outlook Express.
Fumana ifayile ye-dbx ehambelana nefolda yeposi ukuba awukwenzi oko.
Qaphela: Phambi kokufumana kwakhona ii-imeyile kwifayile ye-dbx nge DataNumen Outlook Express Undelete, ndicela uvale Outlook Express kunye nazo naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye-dbx.
Khetha ifayile ye-dbx apho ziya kufunyanwa khona ii-imeyile ezisusiweyo:
Ungafaka igama lefayile ye-dbx ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen Outlook Express Undelete iya kukhupha zonke ii-imeyile ezifumanekileyo kulawulo lwe-xxxx_recovered, apho i-xxxx ligama lefayile eyonakeleyo ye-dbx. Umzekelo, kwifayile ye-Inbox.dbx, ulawulo olungagqibekanga luya kuba yi-Inbox_recovered. Ukuba ufuna ukusebenzisa esinye isikhombisi, nceda ukhethe ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, DataNumen Outlook Express Undelete Ndiza start ukubuyisa ii-imeyile ezicinyiweyo kwifayile ekhethiweyo ye-dbx.
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba ii-imeyile ezicinyiweyo ziye zafunyanwa ngempumelelo kwifayile ye-dbx, uya kubona ibhokisi yomyalezo enje:
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 ikhutshwa ngo-Novemba 23, 2013
DataNumen Outlook Express Undelete 2.0 ikhutshwa ngo-Matshi 5, 2009